Umklamo wangokwezifiso - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
I-Custom LCD Display Module, i-LCM, i-TFT, i-OLED Display yangokwezifiso
I-LCD / LCM / TFT / OLED ngokwezifiso / Semi-ngokwezifiso
Ngaphandle kwemikhiqizo yokubonisa ye-LCD / TFT / OLED ejwayelekile etholakalayo, i-HengTai inikeza izibonisi ezenziwe zenzelwe. Iphothifoliyo ebanzi yenza kube nokwenzeka ukudala izixazululo ezenziwe ngamakhasimende ukuze zivumelane nohlelo lwazo. Sinobuchwepheshe bokubonisa obuthuthukisiwe obusetshenziswa ekwakhiweni kwakho futhi uma kukhona noma yini ofuna ukuyishintsha ngesinye sezibonisi zethu ze-LCD / TFT / OLED ezikhona, singakwenza kwenzeke. Ngolwazi olungaphezulu kweminyaka engama-21, iqembu lethu lokuthengisa nelobunjiniyela lizoba nawe kuyo yonke inqubo yentuthuko futhi lizoqinisekisa ukwenziwa ngokwezifiso okuyisisekelo noma okuphelele okwenziwe ngempumelelo okwenzelwe uhlelo lokusebenza ngalunye.
Izixazululo zethu zokwakheka ngokwezifiso ze-LCD / TFT / OLED ziyatholakala ngezindlela ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende. I-HengTai inganikela ngezinketho ezahlukahlukene kuhlobo lwangemuva, iphini nesixhumi, ikhebula, isikrini sokuthinta (RTP) kanye nesikrini sokuthinta se-capacitive (PCAP) noma ukumboza okulwa nokukhombisa noma okulwa nokukhanya, noma ikhava yangokwezifiso, iZIF PPC noma ibhodi elenziwe ngokwezifiso le-PCB noma isisombululo sangokwezifiso ngokugcwele sohlelo lwakho lokusebenza lomkhiqizo, kanye neSystem Integrated Solution.
Udinga usizo ngokwakhiwa komkhiqizo noma ngesixazululo? Xhumana nathi usebenzisa leli fomu:
OLED / LCM / LCD Qedela inkambiso
OLED Uphenyo Ifomu
Ifomu Lophenyo LCM
Ifomu Lophenyo lwe-LCD
Imiklamo eyenziwe ngezifiso, ukubonisa okwenziwe ngokwezifiso, isibonisi se-oled ngokwezifiso, i-lcd eyenziwe ngokwezifiso, i-lcd yengilazi yangokwezifiso, i-lcd yombala wangokwezifiso, usayizi wokuqapha ngokwezifiso, ukwenza ngezifiso i-LCD wamukelekile.